Ny orinasanao sy ny varotrao dia toy ny ony | Martech Zone
Zoma, Jolay 3, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Nanana fotoana nahafinaritra tamin'ity maraina ity fivarotana fitenenana niaraka tamin'i Lorraine Ball. Ny orinasan'i Lorraine dia misahana manokana ny hetsika tetikady stratejika ho an'ny orinasa kely sy salantsalany any Indianapolis - ao anatin'izany ny fitorahana bilaogy, gazety ary fanambarana an-gazety. Lorraine dia mpanohana be sy ny vadiny Lehilahy mahafinaritra i Andrew ary mpanakanto tsy mampino.
Izaho sy Lorraine dia nanararaotra niasa tamin'ny orinasa lehibe tokoa, saingy tianay ny hakingana sy ny fientanam-po amin'ny orinasa kely. Namporisika ny mpianany rehetra hiasa amina orinasa lehibe mandritra ny taona maromaro i Lorraine… Manoro hevitra an'io ihany koa aho. Ny lesona ianarana amin'ny fitarihana amin'ny orinasa lehibe dia mety manakiana rehefa mitantana orinasa kely.
Amin'ny orinasa lehibe dia lehibe, mba hitazomana ny vokatra, tsy maintsy manome andraikitra ny mpitondra ianao. Ireo mpanara-maso dia manatanteraka ny fahitan'ny mpitondra sy ny mpiasa manara-maso. Mampifandanja ny laharam-pahamehana ny mpitantana ary manala ireo sakana. Ireo mpitantana dia manampy amin'ny fitazonana ny fahitana lavitra ary manome antoka fa mijanona eo amin'ilay làlana ny departemanta. Ny filoha lefitra dia mamorona ny vina maharitra sy ny paikadin'ireo fikambanana. Ireo olona ao amin'ny torolàlana ambony, mampiroborobo, mampifaly ary manara-maso ny orinasa.
[Sary nalaina avy amin'ny a hita ao amin'ny Gnome]
I Lorraine dia nahita fanoharana mahafinaritra. Ny hoe mpitarika ao amin'ny orinasa dia tena mitovy amin'ny fifehezana renirano. Raha ny hampijanona ny renirano no tanjonao dia hahita olana ianao! Manana ny tanjaky ny orinasa… hanao korontana be ianao raha manandrana manipy tohodrano fotsiny na manitsy ny rano tsy tiany aleha. Ny fitantanana ny rano amin'ny renirano dia tsy hiteraka zavatra hafa fa korontana.
Ny tanjon'ny mpitondra dia tokony hampiasa ny tanjaky ny rano hitazomana ny làlan'ny rano mankany amin'ny lalana ilain'ny fahitana. Ny mpitarika tsirairay ao amin'ny fikambanana sy ny ekipany ary ny mpiasa manaraka azy ireo dia fitaovana hanovana ny momentum. Mitaky mpitondra ny mampifanaraka, manome hery ary manome ireo asa ilaina… ary manohy manara-maso ny faravodilanitra sy ny toeran'ilay orinasa.
Tsy mitovy amin'ny Social Media sy Marketing Marketing amin'ny Internet izany. Ny fampielezan-kevitra haorina haingana sy ny paikady tsy miovaova dia mety miteraka vokatra kely etsy sy eroa. Paikady maharitra izay manararaotra ny salantsalany tsirairay avy amin'ny tanjany, miaraka amin'ny loharanon-karena voafaritra tsara, dia afaka mitarika ny reniranon'ny vola miditra ho an'ny orinasanao. Hitohy hihetsika amin'ny onjan'ny hery tsy mampino ilay renirano… ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe hampiasa an'io hery io ianao na hiady aminy!